Izindaba - UV LED DISINFECTION TECHNOLOGY-UV-C LED Technology - The Next Revolution?
I-UV LED DISINFECTION TECHNOLOGY-UV-C Ubuchwepheshe be-LED - Inguquko Elandelayo?
Ubuchwepheshe bokubulala amagciwane be-Ultraviolet (UV) ubulokhu obenza izinkanyezi ekwelashweni kwamanzi nomoya kule minyaka engamashumi amabili edlule, ngenxa yalokho kuyikhono lakhe lokuhlinzeka ngemithi ngaphandle kokusebenzisa amakhemikhali ayingozi.
I-UV imelela ubude bamaza awela phakathi kokukhanya okubonakalayo ne-x-ray ku-spectrum kagesi. Ububanzi be-UV bungabuye buhlukaniswe nge-UV-A, UV-B, UV-C, ne-Vacuum-UV. Isabelo se-UV-C simele ama-wavelengths kusuka ku-200 nm - 280 nm, ubude obusetshenziswa emikhiqizweni yethu ye-LED yokubulala amagciwane.
Ama-photon e-UV-C angena emangqamuzaneni futhi alimaze i-nucleic acid, ewanikeze amandla okuzala, noma i-microbiologically isebenze. Le nqubo yenzeka emvelweni; ilanga likhipha imisebe ye-UV esebenza ngale ndlela.
Kupholile, sisebenzisa ama-Light Emitting Diode (ama-LED) ukukhiqiza amazinga aphezulu ama-photon e-UV-C. Imisebe ibhekiswe kuma-virus, amabhaktheriya kanye nezinye izifo ngaphakathi kwamanzi nomoya, noma ezindaweni ukuze lezo zinambuzane zingabi nangozi ngemizuzwana.
Ngendlela efanayo naleyo ama-LED aguqule ngayo izimboni zokubonisa nezokukhanyisa, ubuchwepheshe be-UV-C LED busethelwe ukuhlinzeka ngezixazululo ezintsha, ezithuthukisiwe, nezandisiwe ekwelashweni komoya namanzi. Isithiyo esimbaxambili, ukuvikelwa kokuhlungwa ngemuva kokutholakala manje lapho amasistimu asuselwa kuma-mercury ebengakaze asetshenziswe ngaphambili.
Lawa ma-LED angabe esehlanganiswa nezinhlelo ezahlukahlukene zokwelapha amanzi, umoya nezindawo. Lezi zinhlelo zisebenza nokufakwa kwe-LED ukusabalalisa ukushisa nokwenza ngcono ukusebenza kwenqubo yokubulala amagciwane.
ISuzhou Puretal Electric Co., Ltd.